विदेशले स्वदेशमा गरिखान सक्ने बनायो | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(August 15, 2020)
विदेशले स्वदेशमा गरिखान सक्ने बनायो
फागुन ८, २०७५ बुधबार १४:८:३७ | मेरो कथा मेरो भोगाई
लक्ष्मण घिमिरे/लुम्दे इलाम ।
म दुई पटक मलेसिया गएँ । मलेसियामा पैसा त कमाउन सकिनँ तर स्वदेशमै गरिखान सक्ने सीप कमाएँ । त्यही सीपको प्रयोग गरेर अहिले आफ्नै ठाउँमा गरिखान सक्ने भएको छु ।
२०६६ सालमा म पहिलो पटक मलेसिया गएको थिएँ । त्यो बेला म १७ वर्षको मात्रै थिएँ । सानो उमेरमै परदेश पुग्दा निकै अप्ठ्याराहरु सहन पर्‍यो । कम्प्यूटरको हार्डडिक्स बन्ने कम्पनीमा थियो काम । भाषा र काम नजान्दा जस्तो सास्ती अर्काको देशमा दोस्रो केही हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई । करार अवधि सकिएपछि घर फर्किएँ ।
घरमा पनि के गरेर बस्ने । फेरि विदेश नै जाने सोच आयो । विदेश जाने चाँजोपाँजो मिलाउँदा मलेसिया नै जाने मेसो मिल्यो । २०७० सालमा मलेसियानै गएँ । दोस्रो पटक मलेसिया जाँदा मलै विमानस्थलदेखिनै खास्ती खेप्नुपर्‍यो ।
मसँगै गएको साथीले ‘बोर्डिङपास’ हराएछ । मलेसियन प्रहरीले माग्दा देखाउन सकिएन । त्यसपछि त विमानस्थलमै समातिहाल्यो । कति साथीले त कुटाइ पनि खाएइरहेका थिए ।
धन्न हामी कुटाइबाट भने जोगियौं । दुई तीन रिंगिटको खाना थियो होला तर प्रहरीले दश रिंगिट मागे । नदिनेलाई खाना पनि दिएनन् । झण्डै १८ घण्टापछि कम्पनीमा गइयो ।
पहिलेनै गइसकेकाले मलेसियाको वातावरण नयाँ नभएपनि मेरा लागि काम नयाँ थियो । फर्निचरको काम मैले त्यसअघि जानेको थिइनँ । काम त राम्रो नै हो तर कम्पनीमा धेरै कागपत्र नभएकाहरु पनि काम गर्ने रहेछन् । त्यसको मारमा म पनि परेँ।
प्रहरीले दुई पटक पक्राउ गर्‍यो । हामीसँग जलान कार्ड (परिचयपत्र) र पासपोर्टको फोटोकपी हुन्थ्यो तर त्यहाँको प्रहरीले त्यसले नमान्ने रहेछ । जेलमा त साह्रै दुःख दिने रहेछ ।
सात जनालाई एउटै साङ्लोले बाध्ने, ट्वाइलेट जाँदा पनि फुकाल्न नदिने । ती दिन सम्झिँदा त अहिले पनि आङ् जिरिङ हुन्छ । तीन वर्ष करार अवधि छउञ्जेल काम गरियो । कति कमाइयो भन्ने हिसाब राखिएन । फर्किंदा साथमा एक डेढ लाख रुपैयाँ थियो । तर मैले दोस्रो पटक मलेसिया जाँदा पैसाभन्दा पनि सीप कमाएँ ।
२०७४ फागुनमा घर फर्किएपछि इलाम बजारमा साथीसँग मिलेर फर्निचर उद्योग चलाइहेको छु । २०७५ वैशाखमा हो फर्निचर उद्योग खोलेको । विदेशमा त्यही सीप सिकेर फर्किएकाले यहाँ काम गर्न सजिलो भएको छ ।
मलाई विदेशमा छँदा नै यतिको दुःख त आफ्नै ठाउँमा गरियो भने धेरै हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । अहिले राम्रो भइरहेको छ । कमाइ पनि विदेशको बराबर नै छ । त्यहाँ पनि धेरै कमाएको भनेको महिनामा २० देखि ३० हजार रुपैयाँ हो । यहाँ पनि त्यती त सजिलै कमाइन्छ ।
तर यहाँ काम गर्दा धेरै फाइदा छ । जस्तो कि विदेशमा म सिकिस्त बिरामी परेँ भने पनि सँगैको साथीले मलाई छाडेर काममा जानुपथ्र्यो । उसले साथीभन्दा काम ठूलो मान्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ सबैको साथ र सहयोग हुन्छ ।
यहाँ काम गर्ने तरिका फरक छ । मेसिनहरु फरक छन् । तर दुःख कम छ । कमाइ चाहिँ विदेशको जतिनै छ । विदेशको भन्दा थोरै होस् तर आफ्नो देशमा काम गर्दा चित्त बुझ्छ ।
७५ हजारमा किनेको फर्निचर उद्योगमा अहिले मेसिनहरु थप्दै बढाउँदै लगेका छौं । अब जस्तो परिस्थिती आएपनि विदेश जान्न । यही कामलाई निरन्तरता दिने योजना छ ।
‘निःशुल्क भिसा र अनिवार्य पीसीआरको नीति अवलम्बन गरे बाह्य पर्य...
साउन ३१, २०७७ शनिबार
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखका नाममा कारण देखाउ आदेश
लिदी पहिरोमा परेकामध्ये १६ जनाको शव भेटियो, १ जनाको जीवितै...
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता
नारायणी नदीमा खतराको संकेत, लालबकैया नदीमा पनि बाढीको सम्भ...
सिन्धुपाल्चोकको लिदी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएकाका परिवारले १...
सर्पले टोकेको भ्रममा परेर महोत्तरीमा ८ जना बेहोस
साइबर अपराध बढ्दो : पहुँच पुग्यो, चेतना पुगेन !
बुटवलमा कोरोना संक्रमित बिरामीको ज्यान गयो
भारतमा कोरोनाविरुद्धको तीन वटा खोप परीक्षणको चरणमा : प्रधानम...
भन्सारका धेरैजसो काम अनलाइनबाटै, केही सेवा स्थगित
सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा मुख्यमन्त्री पाैडेलको टोलीे, बस्तीबारे न...
पर्सामा कोरोना संक्रमणबाट थप एक जनाको ज्यान गयो
बानियाँटारमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी एक युवकको हत्या
गहना किनेबापत नक्कली चेक दिएर भागेकी २९ वर्षीया महिला पक्राउ
राष्ट्र बैंकको निर्देशन : कर्मचारीको पीसीआर खर्च संस्थाले बेहोर्नू, क्वरेण्टीनमा बस्दा तलब नरोक्नू
सिन्धुपाल्चोक : ३७ घर पहिरोले बगायो, ३६ जना सम्पर्कविहिन, दुईको शव भेटियो
इजरायल र यूएईबीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता
कथा : आमाको मायाले पुलपुलिएको खाडीको ‘तोरी लाउरे’
साउन २९, २०७७ बिहिबार
यो टापुमा हामीलाई लिन जहाज कहिले आउला ?
साउन २८, २०७७ बुधबार
कोरोना जितेर कतारबाट घर फर्किएँ
साउन २७, २०७७ मंगलबार